Miaina ho An'Andriamanitra na ao amin'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > toriteny > Miaina ho an'Andriamanitra na amin'i Jesosy
Mametraka fanontaniana amin'ny tenako momba ny toriteny anio aho: "Mivavaka ho an'Andriamanitra ve aho sa amin'i Jesosy?" Ny valin'ireo teny ireo dia nanova ny fiainako ary afaka manova ny fiainanao koa izany. Asa raha manandrana miaina ara-dalàna tanteraka ho an'Andriamanitra aho na manaiky ny fahasoavan'Andriamanitra tsy misy fepetra ho fanomezana tsy mendrika avy amin'i Jesosy. Raha hambara mazava tsara, - Miaina miaraka amin'i Jesosy sy amin'ny alalako aho. Tsy azo atao ny mitory ny lafiny rehetra amin'ny fahasoavana amin'ity toriteny iray ity. Mankany amin'ny fototry ny hafatra aho noho izany:
“Efa nanapa-kevitra Izy fa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy no hahatonga antsika ho zanany. Izany no drafitra nataony, ary izany no tiany. Miaraka amin’izany rehetra izany, dia tokony hoderaina ny hatsaram-panahin’Andriamanitra be voninahitra sy tsy manam-paharoa, izay niainantsika tamin’ny alalan’ny Zanany malalany. miaraka amin'i Kristy no nahavelomana antsika - fahasoavana no namonjena anareo; ary niara-natsangany tamintsika sy nampitoetra antsika any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy” (Efesiana 2,5-6 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Tsy manisa ny zava-bitako
Ny fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ny Isiraely olony tamin'ny fanekena taloha dia ny fanomezana ny lalàna ny vahoaka amin'ny alàlan'i Mosesy. Nefa tsy nisy nahavita nitandrina an'ity lalàna ity tanteraka afa-tsy Jesosy. Andriamanitra dia niahy mandrakariva ny fifandraisana fitiavana tamin'ny olony, saingy indrisy fa olona vitsivitsy tao amin'ny fanekena taloha ihany no niaina sy nahatakatra izany.
Izany no antony nanovana ny fanekena vaovao ho fanovana tanteraka nomen'i Jesosy ny olona. Nomen'i Jesosy fidirana an-tsokosoko mankany amin'Andriamanitra ny fiangonany. Noho ny fahasoavany, miaina anaty fifandraisana velona amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy sy aho. Nandao ny lanitra izy ary teraka tety an-tany ho Andriamanitra sy olombelona ary niara-nonina tamintsika. Nandritra ny androm-piainany dia nahatanteraka tanteraka ny lalàna izy ary tsy nanadino na dia teboka iray aza mandra-panajanony ny fanekena taloha tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty.
Jesosy no olona ambony indrindra teo amin'ny fiainako. Nanaiky azy ho toy ny fanomezana lehibe indrindra ho ahy aho, amin'ny maha-Tompoko, ary feno fankasitrahana aho fa tsy mila miady amin'ny didy sy ny fandraràna ny fanekena taloha intsony.
Ny ankamaroantsika dia efa niaina izany, tamin'ny fahatsiarovan-tena na tsy fahatsiarovan-tena tamin'ny fiainana ara-dalàna. Izaho koa dia nino fa ny fankatoavana ara-bakiteny sy tsy misy fepetra dia fanehoana ny fanolorako tena hampifaly an'Andriamanitra. Niezaka ny niaina ny fiainako tamin'ny fitsipiky ny fanekena taloha aho. Ary ankoatr'izay, ny manao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra, mandra-pahatongan'ilay Andriamanitra Tsitoha naneho tamiko tamin'ny alàlan'ny fahasoavany: "Tsy misy marina na dia iray akory" - afa-tsy Jesosy, ilay fanomezana lehibe indrindra ho antsika! Ny fahaizako manokana amin'ny haingon-trano rehetra dia tsy ho ampy ho an'i Jesosy velively, satria izay zava-dehibe dia izay vitany ho ahy. Nahazo ny fahasoavany fahasoavana aho hiaina ao amin'i Jesosy. Na ny finoana an'i Jesosy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Azoko ekena ny finoana ary amin'ny alalany koa Jesosy, ilay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.
Ny fiainana ao amin'i Jesosy dia fanapahan-kevitra misy vokany lehibe
Tsapako fa miankina amiko izany. Ahoana no hinoako an'i Jesosy? Afaka misafidy ny hihaino azy aho ary hanao izay lazainy satria ny zavatra inoako no mamaritra ny zavatra ataoko. Na izany na tsy izany dia misy vokany amiko izany:
“Fa nanao ahoana ny fiainanao taloha? Tsy nankatò an’Andriamanitra ianao ka tsy te hahalala na inona na inona momba azy. Efa maty teo imasony ianareo, niaina araka ny fanao teto amin’izao tontolo izao, ka resin’i Satana, izay mampiasa ny heriny eo anelanelan’ny lanitra sy ny tany. Na dia amin’izao andro izao aza, ny fanahiny ratsy dia mifehy ny fiainan’ny olona rehetra tsy mankatò an’Andriamanitra. Anisan'izy ireo koa izahay taloha, fony izahay te hamantatra ny fiainantsika manokana. Nandefitra tamin’ny filan’ny nofo sy ny fakam-panahin’ny toetrantsika fahiny isika, ary efa iharan’ny fahatezeran’Andriamanitra tahaka ny olon-drehetra koa » (Efesiana). 2,1-3 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Mampiseho ahy izany: ny fitandremana ny didin'ny fanekena taloha dia tsy miteraka fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Nampisaraka ahy taminy kosa izy ireo satria ny fandraisako anjara dia nifototra tamin'ny fandraisako anjara. Ny sazy noho ny ota dia tsy miova: ny fahafatesana ary navelany teo amin'ny toerana tsy misy antenaina aho. Manaraka izao ny tenin'ny fanantenana:
« Fa lehibe ny famindram-pon’Andriamanitra. Efa maty teo anatrehan’Andriamanitra isika noho ny fahotantsika, fa ny fitiavany antsika dia nomeny antsika ho amin’ny fiainana vaovao miaraka amin’i Kristy. Tsarovy mandrakariva: ny fahasoavan’Andriamanitra irery ihany no anomezanao izao famonjena izao. Izy no nanangana antsika tamin’ny maty niaraka tamin’i Kristy, ary ny fiarahantsika amin’i Kristy dia efa nanome antsika ny toerana misy antsika any an-danitra. Amin’izany, Andriamanitra, amin’ny fitiavany, izay nasehony antsika tao amin’i Jesosy Kristy, dia te haneho ny halehiben’ny fahasoavany mandrakizay. Fa noho ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa ihany no namonjena anareo tamin’ny fahafatesana. Nitranga izany satria mino an’i Jesosy Kristy ianao. Fanomezana avy amin’Andriamanitra izany fa tsy asanao. Tsy afaka mitondra na inona na inona amin'ny alalan'ny zava-bitany ny olona iray. Koa tsy misy azo fitahina amin’ny asa soa ataony » (Efesiana 2,4-9 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Hitako fa ny finoana an'i Jesosy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izay noraisiko tamin'ny tsy mendrika. Maty tanteraka aho satria tamin'ny naha-izy ahy dia mpanota aho ary nanota. Nefa satria navela hanaiky an'i Jesosy ho Mpanavotra sy Mpamonjy ary Tompoko aho dia niaraka nohomboana taminy tamin'ny hazo fijaliana. Ny fahotako rehetra nataoko ary hataoko dia voavela amin'ny alalany. Izany no hafatra mamelombelona sy mazava. Tsy mendrika ahy intsony ny fahafatesana. Manana toetra vaovao tanteraka ao amin'i Jesosy aho. Ilay olona ara-dalàna Toni dia maty ary hijanona ho faty, na dia hitanao aza, na eo aza ny taonany, mandehandeha sy miaina velona izy.
Miaina amin'ny fahasoavana - miaina ao amin'i Jesosy
Miara-miaina amin'i Jesosy sy ao amin'i Jesosy aho na hoe:
“Fa ny lalàna no nanamelohana ahy ho faty. Koa ankehitriny maty amin’ny lalàna aho mba ho velona ho an’Andriamanitra. Ny fiainako taloha dia maty niaraka tamin’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Koa tsy izaho intsony no velona, ​​fa Kristy no velona ato anatiko! Miaina ny fiainako mandalo eto an-tany aho amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, Zanak’Andriamanitra, Izay tia ahy ka nanolotra ny ainy ho ahy. Tsy mandà izany fanomezana tsy mendrika izany avy amin’Andriamanitra izany aho - mifanohitra amin’ny Kristianina izay mbola te hanaraka ny fepetra takin’ny lalàna. Fa raha azon’Andriamanitra hankasitrahana amin’ny fanarahana ny lalàna isika, dia tsy ho faty Kristy. » (Galatiana . 2,19-21 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Fahasoavana no namonjy ahy, fahasoavana no nanandratan'Andriamanitra ahy ary napetraka any an-danitra miaraka amin'i Kristy Jesosy aho. Tsy misy azoko reharehana afa-tsy ny fitiavako an'ilay Andriamanitra Telo Izay Iray ary miaina ao aminy aho. An'i Jesosy ny fiainako. Nataony izay rehetra ilaina amin'ny fiainako mba satro-boninahitra fahombiazana ao aminy. Tsikelikely dia tsapako bebe kokoa fa misy fiovana lehibe na lazaiko hoe: velona ho an'Andriamanitra aho na i Jesosy no fiainako. Mba hahatongavana ho iray amin'ilay Andriamanitra masina, izay manova ny fiainako ifotony, satria tsy mamaritra ny fiainako intsony aho, fa avelao i Jesosy hiaina amin'ny alalako. Soratako amin'ireto andininy manaraka ireto izany.
"Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?" (1. Korintiana 3,16).
Fonenan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho izao, tombontsoa vaovao amin'ny fanekena izany. Izany dia mihatra na fantatro na tsy mahatsiaro tena aho: Na matory aho na miasa dia velona ato amiko Jesosy. Rehefa miaina ny zavaboary mahafinaritra amin'ny fitsangatsanganan'ny snowshoe aho, Andriamanitra dia ato amiko ary manome harena isaky ny fotoana. Misy toerana malalaka foana hamelana an'i Jesosy hitarika ahy sy hanome ahy fanomezana. Avela ho Tempolin'Andriamanitra mihetsika aho ary hankafy ny fifandraisana akaiky indrindra amin'i Jesosy.
Satria mipetraka ato amiko izy dia tsy tokony hatahotra ny tsy hahita ny fahitan'Andriamanitra. Na dia latsaka amin'ny maha-zanany marina azy aza aho dia hanampy ahy izy. Saingy tsy mihatra amiko fotsiny izany. Niady tamin'ny ady tamin'i satana i Jesoa ary nandresy niaraka tamintsika sy ho antsika. Taorian'ny ady nifanaovany tamin'i satana dia nofafany tamin'ny vodin-tsavoka tamin'ny sombin-kazo ny sombin-kazo, toy ny rehefa mihetsiketsika. Novaliany indray mandeha monja ny helotsika rehetra, ny sorona nataony dia ampy ahafahan'ny olona rehetra mihavana aminy.
«Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be; fa raha tsy Izaho dia tsy mahay manao na inona na inona ianareo » (Jaona 15,5).
Mety hifandray amin'i Jesosy aho toy ny voaloboka amin'ny voaloboka. Amin'ny alalany no ahazoako izay ilaina rehetra hiainako. Ho fanampin'izay, afaka miresaka amin'i Jesosy momba ny fanontaniako rehetra amin'ny fiainako aho, satria fantany aho ao anaty ary fantany hoe aiza no mila fanampiana aho. Tsy taitra amin'ny eritreritro izy ary tsy mitsara ahy noho ny hadisoako rehetra. Niaiky ny heloko taminy aho, izay na eo aza ny fahafatesako dia tsy manota aho, rehefa miantso ahy ny namany sy ny rahalahiny. Fantatro fa namela azy izy. Ny maha-mpanota ahy dia ny tantara taloha, izaho dia olom-baovao ary velona ao amin'i Jesosy. Ny fiainana toy izao dia tena mahafinaritra, mahafinaritra mihitsy, satria tsy misy intsony ny kilema manasaraka.
Ny tapany faharoa amin'ilay fehezanteny dia mampiseho amiko fa raha tsy misy an'i Jesosy dia tsy afaka manao na inona na inona aho. Tsy afaka miaina tsy misy an'i Jesosy aho. Matoky an 'Andriamanitra aho fa miantso ny olona rehetra izy mba handrenesana na handrenesana azy. Anjarany ary rahoviana izany no mitranga. Nohazavain'i Jesosy tamiko fa ny teny tsara rehetra nataoko ary na ny asa tsara indrindra nataoko aza tsy nanao na inona na inona mba hahavelona ahy. Mandidy ahy izy handinika izay tiany holazaina amiko irery na amin'ny alàlan'ny mpiara-monina amiko malalako. Nomeny ahy ireo mpiara-monina amiko noho io antony io.
Ampitahako amin'ny mpianatra izay nihazakazaka avy tany Jerosalema ka hatrany Emaosy izahay tamin'izany fotoana izany. Efa niaina andro sarotra izy ireo teo aloha noho ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana ary niresaka momba azy ireo teny an-dalana hody. Nisy olon-tsy fantatra, dia i Jesosy, nihazakazaka niaraka tamin'izy ireo ary nanazava izay voasoratra momba azy tao amin'ny soratra masina. Saingy tsy nahatonga azy ireo ho hendry kokoa izany. Tao an-trano ihany no nahalala azy ireo rehefa namaky mofo. Tamin'ny alàlan'ity tranga ity dia nahazo fahalalana momba an'i Jesosy izy ireo. Nilatsaka toy ny mizana izy io tamin'ny mason'izy ireo. Velona Jesosy - Izy no Mpamonjy. Mbola misy misokatra toy izany ve ny maso ankehitriny? Izay raha ny hevitro.
Mety ho fanamby ho anao ny toriteny hoe "Live for God or in Jesus". Avy eo dia hanana fotoana tsara ianao hiadian-kevitra momba an'i Jesosy. Tiany be ny resaka akaiky ary faly izy mampiseho aminao fa ny fiainana no iray amin'ireo fahagagana lehibe indrindra ao aminy. Mameno fahasoavana ny fiainanao Izy. Jesosy ao aminao no fanomezana lehibe indrindra anananao.